Fanaovan-tsonia famatsiam-bola vaovao avy amin'ny Masoivoho iraisam-pirenena koreanina (KOICA) ho an'ny tetikasa fiaraha-miasa eo amin'ny UNICEF sy ny Governemanta Malagasy | Primature
Fanaovan-tsonia famatsiam-bola vaovao avy amin’ny Masoivoho iraisam-pirenena koreanina (KOICA) ho an’ny tetikasa fiaraha-miasa eo amin’ny UNICEF sy ny Governemanta Malagasy
Mahazoarivo, faha 14 mai 2018– Tontosa androany ny fanaovan-tsonia ny tetikasa fanatsarana ny fiainan’ny tanora indrindra ny ankizivavy any amin’ny faritra Anôsy, amin’ny alalan’ny fanabeazana sy fahasalamana ara-kalitao. Nanome voninahitra ny lanonana ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier, notronin’ny Minisitry ny Fanatanjahantena sy ny Tanora sy ny Minisitry ny Fahasalamana. Nanatanteraka ny fifanaovan-tsonia kosa ny Ambasadaoro Koreanina tatsimo eto amintsika Andriamatoa Lim Sang-woo sy ny solontenan’ny UNICEF Ramatoa Elke Wisch.
Famatsiam-bolan’ny Repoblikan’i Corée amin’ny alalan’ny Masoivoho iraisam-pirenena koreanina (KOICA) izy ity, izay hotanterahin’ny UNICEF ka hiarahany miasa amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ary ny Ministeran’ny Mponina sy Fampiroboroboana ny vehivavy. Haharitra efa-taona ny tetikasa izay mitentim-bidy 6 tapitrisa dôlara ary tanora 200 000 no hisitraka izany any amin’ny faritra Anôsy ka ankizivavy ny antsasany mahery amin’izany. Nosafidiana manokana hatao mpitarika amin’ity tetikasa ity ny faritra Anôsy noho izy be mponina ary amin’ny ankapobeny dia ahitana fisian’ny olana eo amin’ny tanora indrindra ny ankizivavy: ambany ny tahan’ny tanora tafajanona an-tsekoly, avo ny tahan’ny fanambadiana aloha loatra ary ambony koa ny tahan’ny ankizivavy mitondra vohoka aloha loatra.
Nanamafy izany ny Praiminisitra raha nitafa tamin’ny mpanao gazety : « Tafiditra amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny Filoham-pirenena amin’ny fanabeazana ny tanora ity tetikasa ity. Vola mitentina 6 tapitrisa dôlara no atokan’ny firenena koreanina hanampiana antsika indrindra ireo tanora vehivavy any amin’iny faritra iny. Ny UNICEF no hitantana azy miaraka amin’ireo ministera izay voakasiky ny tetikasa. Ao ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena satria tsapantsika fa betsaka ny ankizivavy any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy izay manahirankirana ny fitaizana azy ao an-tsekoly, ao ny tsy mandeha an-tsekoly mihitsy fa manampy ny ray aman-dreniny ao an-tokatrano ka mba hialana amin’izay dia hisy ny fitaizana manokana ireo tanora vehivavy ireo. Hisy ny fanamboarana sekoly, hisy koa ny fanomezana vatsin’ankohonana (transfert monétaire) amin’ny alalan’ny ministeran’ny Mponina ho an’ireo ray aman-dreny mba hamporisihana ny zanany handeha an-tsekoly. Ireny ankizivavy ireny noho ny enti-manana eo amin’ny ray aman-dreniny dia tsy afaka manatanteraka izay adidiny amin’ny maha-mpianatra azy izay. Tafiditra ihany koa ny ministeran’ny Fahasalamana satria ny zavamisy dia betsaka ireo ankizivavy tsy ampy taona mitondra vohoka aloha loatra sy ny manambady mbola tsy ampy taona. Koa hisy ny fanabeazana hataon’ny minisiteran’ny Fahasalamana mahakasika izay zavatra izay. Tafiditra anatin’ny tetikasa koa ny ministeran’ny Tanora satria amin’ny alalan’ny ministera no ananantsika ny politika momba ny tanora. Misy ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fijerena ny tanora amin’ny ankapobeny eto Madagasikara, ka ity tetikasa iarahantsika amin’ireo mpiara-miombon’antoka dia ny firenena koreana tatsimo sy ny UNICEF ity izany dia manamafy izay politika miompana amin’ny tanora ananantsika Malagasy izay, manamafy koa ny Vinan’ny Filoham-pirenena. Misy zavatra tiako hotsipihina mahakasika azy io: ireo vola ireo, marina fa ny mpiara-miombon’antoka no manome azy, ny UNICEF no mitantana azy fa tsy maintsy arakaraky ny laharam-pahamehan’ireo ministera izay voatanisa teo no anatanterahana ny tetikasa any an-toerana satria efa misy daholo ny fandaharan’asa ho an’ireo ministera tsirairay avy ireo ka ny “prioritén’ny governemanta” no tanterahina. Fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka ireo no atao fa tsy misy atahorana hoe ny vahiny no mibaiko ny zavatra tanterahina”.
← Fianianana sy fametrahana ny Filoha voalohany teny anivon’ny Fitsarana an-tampony
Fitsidihana ara-pomba fifanajan’ny delegasiona avy any Afrika Atsimo tao amin’ny Praiminisitra →
Signature de l’Addendum au protocole d’accord entre Mercy Ships et la République de Madagascar